Vaenzi uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Hofisi yeZvapupu zvaJehovha muDenmark
Munofanira kusvika nguvai? Kuti mutange nenguva, tinokukumbirai kuti musvike pachiine maminitsi 10 nguva dzamakabhuka dzisati dzakwana.
Tinoona nezvebasa rinoitwa neZvapupu zvaJehovha zvinopfuura 50 000 muDenmark, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Norway, neSweden. Tinoshandura mabhuku mumitauro 6 nemimwe mitauro 3 yemasaini uye tinoonawo nezvekurodhwa kwemavhidhiyo nezvimwe zvekuteerera mune mimwe yemitauro iyi.
Mahofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Denmark